Khiyaanada 3D – Imposter Hunt khiyaamooyin&Hack – Talooyin Cheats Android
Khiyaanada 3D – Imposter Hunt khiyaamooyin&Hack
Khiyaanada 3D - Yaa sheydaanka ku jira? 👺
Ilaa qaar ka mid ah madadaalada ciyaaraha caadiga ah ee shaydaanka? Ku biir falka xiisaha leh ee ugaadhsiga ama la ugaarsanayo ee khiyaanada 3D, halkaas oo aad doorarka u beddesho shaydaanka iyo ilaaliye.
👹 Marka aad tahay shaydaan, Hawshaadu waa inaad ka saarto dhammaan jilayaasha kale iyada oo aan la qaban: Shaqaalayso khiyaanadaada iyo gacan-ku-dhiigleyaashaada si aad ugu soo dhex dhuunto qof kasta oo aad u gowracdo iyadoo qofna aanu eegayn, ka dibna ka bax ogaanshaha inta uu saacaduhu hoos u dhacayo.
👮 Sida ilaaliye, Waxaad u baahan doontaa dhammaan awoodahaaga indho-indheynta iyo ka-goynta si aad u soo qabato gacan-ku-dhiiglaha ka hor intaysan helin fursad ay ku dilaan adiga iyo dhammaan dadka kale ee aan waxba galabsan - ilaa aad ku qabato falka, waligaa ma ogaan doontid qofka sheydaanka ku jira!
Mudanayaal iyo Marwooyin, WAXAA NAGA DHEX JIRA DILA... 🕵️‍♂️
★ dhinacgee ayaad joogtaa? Dhibtu waa nolol ama geeri, laakiin waxaad go'aansan kartaa inaad ka mid tahay dhinaca malaa'igaha ama aad jeclaan lahayd inaad ka baxdo dembiyada foosha xun ee ciyaarta-fudud ee ciyaarta laakiin dhaq-dhaqaaqa iyo madadaalada aan dhammaadka lahayn.
★ Si tartiib ah u soco - oo leh wax ka badan 120 heerar kala duwan oo lagu ciyaaro, 🔪 dilka, qas iyo ficil 🔥 weligood ma dhammaan. Inta aad ciyaarta ku dhex marayso, goobuhu way sii weynaanayaan oo way sii weynaanayaan, iyo tirada jilayaasha way koraan oo koraan, taas oo ka dhigaysa mid aad u adag in la iska ilaaliyo dhamaadka naxariista leh ama -haddii aad tahay qofka samaynaya dhamaadka arxan darada ah - baxso iyada oo aan la ogaan.
Master of disguises - dhamaystiran heerar si ay u horumariyaan ciyaarta iyo kasbado abaalmarino ay ku jiraan 38 maqaar jilayaal kala duwan oo matalaya filimada qarsoon ee xiisaha leh, iyo sidoo kale goobo cusub oo soo jiidasho leh iyo lacagta ciyaarta dhexdeeda.
★ Hababka shaydaanka - xeerarku waa toosan yihiin, Laakin ciyaarta ciyaarta waxaa si joogto ah loogu wanaajiyaa farsamooyin cusub oo khiyaano leh, oo ay ku jiraan suufka boodboodka ee caawiya Ilaaliyeyaasha inay u tartamaan goobta dembigu ka dhacay, Hawo-mareeno u oggolaanaya gacan-ku-dhiiglayaasha 🥷 inay qol ilaa qol uga guuraan si qarsoodi ah ugu dambeeya, albaabbada xidhan, iyo kamaradaha CCTV-ga oo si toos ah wax uga arki kara muuqaalkaaga malaa'igaha.
★ Dhammaan laxanka ugu fiican - Khiyaamada 3D waxay ku faantaa naqshado dabeecad madadaalo leh iyo dhawaaqa dilaaga ah ee bilaaba waqtiyada xiisadda ugu weyn si kor loogu qaado ficilka iyo khibradaada ciyaarta..
MAXAA SHEYDAANKU KU SOO GALAY?
Waxaad rabtaa dhammaan xiisaha aad u leedahay inaad noqoto baaraha Ace iyo gacan ku dhiigle? Raadinta ciyaar bixisa xamaasad xamaasad leh iyo adrenaline? Diyaar u ah inuu ciyaaro labada dhinac ee sharciga? Aad u xiisaynaysa inaad tijaabiso xatooyadaada iyo xirfadahaaga xeeladaysan?
Soo deji khiyaanada 3D hadda oo u gal duni nacab dil ah, khiyaamo, iyo madadaalo wanaagsan oo shaydaan ah.
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: Betrayal, CheatsHack, Hunt, Imposter
← Macallinka cabsida leh: Baxsashada Dugsiga – Khiyaamo&Hack Afuufi – Khiyaamo&Hack →
Ciyaarta Squid 3D 2022 – Khiyaamo&Hack